Rehefa manana ny enti-manana amin’izany ireo ray aman-dreny dia afaka mandoa ny azy mialoha, toy ny “droit”, ny saram-pianarana. Fa ho an’ireo tsy afaka manefa izany, dia izay no hisian’ilay fifanarahana ary mandoa azy tsikelikely. Misy amin’ireo ray aman-dreny mantsy no mbola mandoa saram-pianarana amin’ity volana aogositra ity, avy eo mandoa ny saran’ny fidirana. Ekena izay fifanarahana izay, raha toa ka mpianatra tao amin’ny sekoly nandritra ny taona no mianatra ao amin’ny sekoly, hoy ity mpanabe ity. Ilaina ihany koa ny mifampitsinjo. Sarotra ny fiainana, ka izay no hisian’ny marimaritra iraisana. Marihina fa ny volana oktobra vao miditra mianatra ny mpianatra ao amin’ity sekoly tsy miankina iray nanaovana ny fanadihadiana ity.